MMEMME MAKA NJIKỌ FTP. OTU ESI JIKỌỌ NA IHE NKESA FTP - NETWORK NA INTANETI - 2019
Mmemme maka njikọ FTP. Otu esi jikọọ na ihe nkesa FTP
Oge dị mma!
Site na protocol FTP, ị nwere ike ịnyefe faịlụ na nchekwa na netwọk na netwọk mpaghara. N'otu oge (tupu ebute mmiri) - e nwere puku puku FTP na-egosiputa ọ bụla faịlụ.
Ka o sina dị, ma ugbu a, usoro FTP dị ezigbo mma: dịka ọmụmaatụ, na ejikọta na sava ahụ, ịnwere ike bulite weebụsaịtị gị; iji FTP, ị nwere ike ịnyefe faịlụ nke ọ bụla ọ bụla na ibe (ọ bụrụ na enwere njikọ - nbudata nwere ike ịmalite site n'oge "agbaji," ma ọ bụghị malitegharịa).
N'isiokwu a, m ga-enye gị ụfọdụ mmemme kachasị mma maka ịrụ ọrụ na FTP ma gosipụta gị otu esi jikọọ na ihe nkesa FTP n'ime ha.
Site na ụzọ, netwọk nwekwara ọkachamara. Ebe ebe ị nwere ike ịchọ faịlụ dị iche iche na ọtụtụ narị sava FTP na Russia na ná mba ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọ faịlụ ndị na-adịghị adịkebe nke a na-apụghị ịhụ na isi ndị ọzọ ...
Official saịtị: //wincmd.ru/
Otu n'ime ihe omume kachasị elu nke na enyere aka na ọrụ: na ọtụtụ faịlụ; mgbe ị na-arụ ọrụ na ebe nchekwa (iwepu, nkwụnye, nhazi); ọrụ na FTP, wdg.
N'ozuzu, ihe karịrị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'isiokwu m, akwadoro m ịnweta usoro a na PC (dị ka mgbakwunye onye nduzi ntụziaka). Tụlee otú usoro a si jikọọ na ihe nkesa FTP.
Ihe dị mkpa! Iji jikọọ na ihe nkesa FTP, 4 igodo igodo dị mkpa:
Server: www.sait.com (ọmụmaatụ). Mgbe ụfọdụ, adreesị ozi-e kwuru kpọmkwem dị ka adreesị IP: 192.168.1.10;
Port: 21 (ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri na-arụkarị bụ 21, ma mgbe ụfọdụ, ọ dị iche na uru a);
Nbanye: Aha njirimara (nke a dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ekwetaghị aha njikọ na FTP server. N'okwu a, ị ga-edebanye aha ma ọ bụ onye nchịkwa ga-enye gị nbanye na paswọọdụ maka ịnweta). Site n'ụzọ, onye ọrụ ọ bụla (ya bụ, nbanye ọ bụla) nwere ike ịnweta ikike FTP nke ya - a na-ekwe ka onye ọ bụla bulite faịlụ ma wepụ ha, na nke ọzọ naanị ibudata ya;
Okwuntughe: 2123212 (paswọọdụ maka ịnweta, jiri ya na nbanye).
Ebee na otu esi tinye data iji jikọọ FTP na Total Ọchịchị
1) Anyị weere na ị nwere 4 nkeji maka njikọ (ma ọ bụ 2, ọ bụrụ na a na-ahapụ ya ka ọ jikọọ FTP na ndị ọrụ amaghi aha) na Nchịkọta Ọchịchị niile.
2) Na-esote na ọrụ ọrụ na Total Commader, chọta akara ngosi "Jikọọ na ihe nkesa FTP" ma pịa ya (nseta ihuenyo n'okpuru).
3) Na mpio na-egosi, pịa "Tinye ...".
4) Na - esote, ịkwesịrị ịbanye na paragraf ndị a:
Aha njikọ: tinye ihe ọ bụla nke ga-enye gị ngwa ngwa ma dị mfe icheta ihe nkesa FTP ị ga-ejikọta. Aha a enweghi ihe o bula ma oburu na odi nma gi;
Server: n'ọdụ ụgbọ mmiri - ebe ị chọrọ ezipụta adreesị nkesa ma ọ bụ adreesị IP. Dịka ọmụmaatụ, 192.158.0.55 ma ọ bụ 192.158.0.55:21 (na mbipute ikpeazụ, a na-egosikwa ọdụ ụgbọ mmiri ahụ mgbe adreesị IP gasịrị, mgbe ụfọdụ, ọ gaghị ekwe omume ijikọ na-enweghị ya);
Akaụntụ: nke a bụ aha njirimara gị ma ọ bụ aha njirimara, nke e nyere n'oge ndebanye aha (ọ bụrụ na ejiri aha ezoro ezo na ihe nkesa ahụ, mgbe ahụ ịkwesighi ịbanye);
Okwuntughe: nke oma, enweghi ihe ozo ebe a ...
Mgbe ịbanye na mpaghara ndị ọzọ, pịa "OK".
5) Ị ga-ahụ onwe gị na windo mbụ, naanị ugbu a na ndepụta nke njikọ FTP - a ga-enwe nnọọ njikọ ọhụrụ anyị. Ịkwesịrị ịhọrọ ya wee pịa bọtịnụ "Jikọọ" (lee nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
Ọ bụrụ na emee n'ụzọ ziri ezi, mgbe oge ụfọdụ, ị ga-ahụ ndepụta nke faịlụ na nchekwa dị na sava ahụ. Ugbu a, i nwere ike inweta ọrụ ...
Official saịtị: //filezilla.ru/
Free na adaba FTP ahịa. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ele ya anya dịka usoro kachasị mma. Maka uru mbu nke usoro a, m ga-ezo aka na-esonụ:
intuitive interface, dị mfe na ezi uche iji;
ikike ịmaliteghachi faịlụ ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị;
Na-arụ ọrụ na OS: Windows, Linux, Mac OS X na os ndị ọzọ;
ikike ịmepụta ibe edokọbara;
nkwado maka ịdọrọ faịlụ na nchekwa (dịka onye nyocha);
egbochi ọsọ nke na-ebufe faịlụ (bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ inye usoro ndị ọzọ ọsọ ọsọ);
nhazi ndekọ na ihe ndị ọzọ.
Ịmepụta njikọ FTP na FileZilla
Ihe dị mkpa maka njikọ ahụ agaghị adị iche na ihe anyị na-eme iji mepụta njikọ na Total Ọchịchị.
1) Mgbe ịmalitere usoro ihe omume ahụ, pịa bọtịnụ ka ịmepe njikwa njikwa. Ọ nọ na nkuku aka ekpe (lee nseta ihuenyo n'okpuru).
2) Ọzọ, pịa "New Site" (n'aka ekpe, ala) ma tinye ihe ndị a:
Onye ọbịa: Nke a bụ adreesị nkesa, na ọnọdụ m ftp47.hostia.name;
Port: ị pụghị ịkọwa ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ị na-eji ọdụ ụgbọ mmiri 21, ọ bụrụ na ọ dị iche - mgbe ahụ dee;
Usoro: Protocol mbufe data FTP (enweghị ihe ọ bụla);
Ntuchi: na n'ozuzu, ọ bụ ihe amamihe ịhọrọ "Jiri FTP doro anya site na TLS ma ọ bụrụ na ọ dị" (n'ọnọdụ m, ọ gaghị ekwe omume iji jikọọ na ihe nkesa ahụ, ya mere a họọrọ njikọ na mbụ);
Onye ọrụ: nbanye gị (maka njikọ na-amaghị aha ọ dịghị mkpa ịtọ);
Okwuntughe: ejiri ya na nbanye (maka njikọ aha na ọ dịghị mkpa ịtọ).
N'ezie, mgbe ị kwusịrị ntọala ahụ, ihe niile ị ga-eme bụ pịa bọtịnụ "Jikọọ". N'ụzọ dị otú a, a ga-eguzobe njikọ gị, ma e wezụga nke a, a ga-echekwa ntọala ahụ ma chee ya dị ka ihe edokọbara. (rịba ama akụ ahụ na-esote akara ngosi ahụ: ọ bụrụ na ị pịa ya - ị ga-ahụ saịtị niile ị chebere ntọala njikọ)nke mere na oge ọzọ i nwere ike jikọọ na adreesị a na otu igodo.
Site na saịtị: http://www.globalscape.com/cuteftp
FTP dị mfe ma dị ike. O nwere ọtụtụ atụmatụ mara mma, dịka:
nkwụghachi nke nbudata nbudata;
ịmepụta ndepụta nke ibe edokọbara maka weebụsaịtị (ọzọ, a na-eme ya n'ụzọ dị mfe na ọ dị mfe na adaba iji: ị nwere ike jikọọ na sava FTP na 1 pịa nke òké);
ike ịrụ ọrụ na iche iche faịlụ;
ikike ike edemede na nhazi ha;
onye ọrụ-enyi na enyi interface na-eme ka ọrụ dị mfe ma dị mfe, ọbụna maka novice ọrụ;
Ọkachamara Njikọ bụ ọkachamara ọkachamara maka ịmepụta njikọ ọhụrụ.
Na mgbakwunye, usoro ihe omume a nwere interface Russian, na-arụ ọrụ na nsụgharị niile nke Windows: 7, 8, 10 (32/64 Bits).
Okwu ole na ole banyere ịmepụta njikọ FTP na CuteFTP
CuteFTP nwere ọkachamara njikọ dị mma: ọ na-enye gị ohere ngwa ngwa na ngwa ngwa ịmepụta ibe edokọbara ọhụrụ na sava FTP. Ana m akwado iji ya (nseta ihuenyo n'okpuru).
Ọzọ, ọkachamara ahụ ga-emepe: ebe ị ga - ebu ụzọ dee adres nkesa (dịka egosiri, gosipụtara n'okpuru ebe a na nseta ihuenyo), wee dee aha node - nke a bụ aha ị ga-ahụ na ndepụta nke ibe edokọbara (M nwere ike ikwu inye aha na-akọwa ihe nkesa ahụ n'ụzọ ziri ezi, ya bụ, ka o doo anya ozugbo ebe ị na-ejikọta, ọbụna mgbe otu ọnwa ma ọ bụ abụọ gasịrị).
Mgbe ahụ, ị ​​ga-ezipụta aha njirimara na paswọọdụ site na sava FTP. Ọ bụrụ na ịkwesighi ịdebanye aha iji nweta sava ahụ, ị ​​nwere ike igosi na njikọ ahụ abụghị aha na pịa (dị ka m mere).
Ọzọ, ịkwesịrị ịkọwa nchekwa mpaghara nke a ga-emeghe na windo na-esote ihe nkesa mepere emepe. Nke a bụ ihe mega-kemfe: were ya na ị na-ejikọta na ihe nkesa nke akwụkwọ - na tupu i mepee akwụkwọ nchekwa gị (ị nwere ike ibudata faịlụ ọhụrụ na ya).
Ọ bụrụ na ịbanyere ihe niile n'ụzọ ziri ezi (na data ahụ ziri ezi), ị ga-ahụ na CuteFTP ejikọrọ na nkesa (kọlụm nri), na nchekwa gị na-emeghe (akaekpe ekpe). Ugbu a ị nwere ike ịrụ ọrụ na faịlụ na sava ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na faịlụ na draịvụ ike gị ...
Na ụkpụrụ, enwere ihe omume ole na ole iji jikọọ na sava FTP, ma na m chere na ndị atọ a bụ otu n'ime ihe ndị kasị adaba ma dị mfe (ọbụlagodi maka ndị ọrụ novice).
Nke ahụ bụ ihe niile, ọdịmma niile!